Ry Mpiserasera Rosiana, Manara-maso Ny Karatra Nomerika Solom-bolanao i Putin · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Mey 2014 15:24 GMT
Vakio amin'ny teny Deutsch, Français, Ελληνικά, Español, 繁體中文, 简体中文, বাংলা, English
Yandex, karatra solom-bola. Pikantsary tao amin'ny Youtube.
Ankoatra ny sivana tsy an-kiato mihatra amin'ny RUNET sy ny faneriterena ireo habaky ny mpanohitra, nametraka fitsipika henjana amin'ny fomba fandoavam-bola amin'ny aterineto koa i Rosia. Mametra ny fandoavam-bola antserasera tsy fantatra anarana (anonyme) hoan'ny fikambanana ny lalàna vaovao izay hanan-kery amin'ity fahavaratra ity farafahatarany, ary mandrara ireo fandoavam-bola antserasera tsy fantatra anarana eo amin'ny samy olo-tsotra.
Na dia tafiditra ao anatin'ny fitambarana lalàna natao hiadiana amin'ny fampihorohoroana [tatitra Global Voices] aza izany resaka izany, dia tsara ny mampatsiahy fa novatsiana ara-bola tamin'ny alalan'ny fanomezana tao amin'ny aterineto ny fampielezan-kevitry ny fifidianana ben'ny tanàna nahitam-pahombiazana goavana nataon'ny lehiben'ny mpanohitra Alexey Navalny tamin'ny 2013 iny. Voatsikera noho ny tsy fisian'ny mangarahara tamin'izany fotoana izany ny fampielezan-kevitr'i Navalny, saingy mandrak'ankehitriny, tsy mbola nandray fepetra mihitsy ny manampahefana.
Tamin'ny Zoma 23 Mey, nosavain'ny Komity mpanao famotorana ny biraon'ny Yandex.Money, rafitra fandoavam-bola malaza miara-miasa amina orinasa mili-pikarohana goavana ao Rosia, toa noho ny fiampangana fanaovana hosoka tamin'ny fampieleza-kevitra nandritra ny fifidianana ben'ny tanàna tamin'ny fahavaratra taona 2013 tao Moskoa no anton'izany. Noho ny fisian'ireo mpanohana marobe an'i Navalny nanolotra volabe tsy hita pesipsenina tamin'ny fampielezan-kevitra amin'ny maha-olo-tsotra azy ireo no anton'izany, ary avy eo nangataka ny hamenoana indray ny lany tamin'ny alalan'ny fanomezana isan-karazany indray tamin'ny alalan'ny Yandex.Money. Amin'izay fotoana izay, raha zohiana ilay fomba fisainana, dia tsy misy ny ahiana amin'ny hoe mety ho nisy ny fanampian'ny avy any ivelany tamin'ny fampielezan-kevitr'i Navalny, ary tahaka izany, rehefa eo amin'ny fanajana ara-bakinteny ny lalàna.
Namaly ny famotorana nataon'ireo Komity mpanao famotorana tao amin'ny bilaoginy ( izay efa nakatona noho ny baikon'ny mpandrindra ny aterineto Rosiana Roskomnadzor) i Navalny fa nangarahara ny fizotry ny fanomezana – nalefa tao amin'ny kaontim-bolan'ny antoko politikan'i Nalvany ireo fanomezana voarain'ireo tompon'andraikitra izay mihoatra ny 1 tapitrisa robla ( fetran'ny fanomezana ambony indrindra araka ny lalàna), ary nampiasaina tamin'ny fampielezan-kevitra izany avy eo. Nanoratra ihany koa i Navalny fa ity karazana famotorana heloka bevava ity dia anisan'ny fanentanana faobe hamerana araka izay tratra ny hetsika fanangonam-bola fitiatsimbahetra ara-politika sy ara-pifidianana. Mampatahotra an'i Kremlin ny fahafahana manangona antapitrisa robla avy amin'ny mpanohana an'arivony, sy ny tsy fisian'ny fanarahamaso ara-politika misy ifandraisana amin'izany.